Torohevitra 5 hampiroborobo ny orinasanao amin'ny finday | Martech Zone
Torohevitra 5 hampiroborobo ny orinasanao amin'ny finday
Talata, Novambra 30, 2010 Talata, Septambra 4, 2012 Douglas Karr
OpinionLab dia namoaka torohevitra dimy izay hanampy ny orinasa hanatsara ny traikefa finday sy hisarika mpanjifa vaovao:
Atombohy amin'ny traikefan'ny mpampiasa: Ny traikefan'ny mpampiasa tsara no jerena voalohany amin'ny fahombiazan'ny finday. Matetika loatra, ny orinasa dia manandrana maka tahaka ny fizotran'ny tranokala nentim-paharazana amin'ny fananana finday. Mba hiantohana ny fampiasana finday tsara indrindra dia mifantoha amin'ny filan'ny mpanjifa sy ny orinasa, izay mety miovaova be amin'ny an'ny tranonkala nentim-paharazana. Ny zavatra tsotsotra toa ny haben'ny bokotra (ampy ve ireo?) Ary ny fiantohana fa tsy misy ny fikororohana mifanila matetika dia tsy raharahiana amin'ny ezaka voalohany ary afaka manaloka na dia ny fampiasa lehibe indrindra aza. Atombohy amin'ny fihainoana ny mpanjifanao: fantaro ny fomba tian'izy ireo hifandraisany amin'ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fitaovana finday sy ny fomba ampiasan'izy ireo ny fantsona finday amin'izao fotoana izao hanatanterahana ny tanjon'izy ireo. Hamarino tsara fa hamolavola sehatra finday mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, ary alao antoka fa ny seta misy anao dia mandray ireo fanamby miavaka amin'ny traikefa amin'ny finday.
Aza mieritreritra hoe mila fampiharana ianao: Ho an'ny orinasa sasany dia ataonao tanteraka izany; ho an'ny hafa, tsy mendrika ny fampiasam-bola izany, ary hanao tsara kokoa ianao amin'ny fampiasam-bola amin'ny fisian-tranonkala finday. Mandanja ny tombony sy ny maharatsy azy: Ny tranokala finday dia manana antso avo amin'ny tsena marobe ary azo idirana amin'ny karazana fitaovana finday rehetra. Nefa na dia mahatratra olona vitsy kokoa noho ny tranokala finday aza ny rindranasa finday, maro ny orinasam-pandraharahana no maniry io fantsona marketing io, satria manome traikefa miavaka sy mifantoka manokana ho an'ny smartphone ny mpanjifa.
Aza mieritreritra fa finday dia midika hoe finday foana: Alao antoka fa manome rohy malaza amin'ny tranokalanao feno ianao ho an'izay maniry hiditra ao. Ny votoatin'ny finday finday amin'izao fotoana izao dia afaka mivezivezy mora foana amin'ny ankamaroan'ny tranonkala feno, ary ny tena marina dia maro ireo tranonkala finday no tsy manome ny fidirana amin'ireo fiasa mitovy hita amin'ny tranokala feno — ireo fiasa tadiavin'ny mpitsidika maro na mila ampiasainy mandritra ny diany . Na dia mety aza ny manamarina ny fifandanjan'ny kaonty bankyo amin'ny alàlan'ny tranokala finday, mety ho zava-dehibe ny mandoa vola amin'ny alàlan'ny fizarana fandoavam-bola amin'ny tranokala iray manontolo izay tsy nafindra amin'ny finday velively.
Manararaotra teknolojia finday efa misy, maimaim-poana, hifandraisana amin'ireo mpihaino finday: Na inona na inona fampiasam-bola ataon'ny orinasanao amin'ny fampiasana finday tsara indrindra, ny haitao efa misy dia afaka manampy anao hifandray amin'ireo mpihaino finday tsy misy fampiasam-bola goavana amin'ny fampandrosoana teknolojia. Ny lazan'ny serivisy miorina amin'ny toerana toa an'i Foursquare sy Facebook Places dia nanova ny fomba fivarotana marika amin'ny mpanjifa finday amin'ny alàlan'ny famelana ireo orinasa biriky hamantatra mora sy hanome valisoa ireo mpiaro tsy mivadika amin'ny miavaka sy fihenam-bidy isan-karazany. DialogCentral dia ohatra iray hafa amin'ny teknolojia finday maimaim-poana izay mandrisika ny firotsahana: amin'ny fampiasana an'ity fitaovana ity, ny mpanjifa dia afaka mandefa fanehoan-kevitra mivantana amin'ny orinasa mandritra ny diany, ary ny orinasa dia afaka mahazo ny hevitry ny mpanjifa amin'ny fotoana tsy andoavany vola.
Mampiasà rafitra fandrefesana finday mahomby: Ny ankamaroan'ny orinasa ankehitriny dia tsy manana fitaovana ampy handrefesana amin'ny fomba mahomby ny ezaka amin'ny finday. Voalohany, miverina miverina ary diniho tsara izay afaka sy refesina. Ao amin'ny tontolon'ny finday dia tsy mihatra intsony ny metrika mahazatra, koa mitadiava fepetra handaminana ny fantsona rehetra an'ny marika maoderina anao, toy ny fandraisan'anjaran'ny mpanjifa. Avy eo, farito ny masontsivana ilaina hampiharana ireo fepetra ireo amin'ny toetra mampiavaka ny orinasanao. Diniho ny rafi-panamarihana opt-in, open-text ho toy ny ampahany amin'ny fandaharam-pandrefesanao mba hahazoana antoka fa miorina amin'ny filan'ny mpanjifa ny fanapahan-kevitrao fa tsy heverin'ny orinasa.
Satria maro ny mpanjifa miantehitra amin'ny findainy sy amin'ny findainy amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny fiantsenana an-tserasera ka hatramin'ny famandrihana fialantsasatra, banky ary fandoavana faktiora, ny orinasa dia mila mamorona traikefa finday tsy misy tomika ary mihaino izay lazain'ny mpanjifany momba azy ireo. Rand Nickerson, tale jeneralin'ny OpinionLab
Tags: fitomboan'ny findayfinday-barotra
Ny fitaomana mampidi-doza amin'ny fisorohana ny tranonkala sosialy
Tsy afaka mifanohitra amin'ny Won't
Famoronana tranokala finday
Mar 25, 2011 amin'ny 4: 33 AM
Teboka tsara hampivelarana ny orinasa amin'ny alàlan'ny finday…